Tsiavaliky Célestin : “Mila ovaina ny rafitra “ | NewsMada
Tsiavaliky Célestin : “Mila ovaina ny rafitra “
“Tsy manova na inona na inona na kitihina na tsia ny lalàmpanorenana, raha tsy miova ny rafitra ifampitondrantsika. Tokony hanaovana fitsapan-kevi-bahoaka ny hoe: hotohizantsika ve izao rafitra ifampitondrantsika izao sa hohavaozintsika? Izay aloha no tadiavina.”
Izay ny fanehoan-kevitry ny mpampianatra mpikaroka, ny Pr Tsiavaliky Célestin, manoloana ny adihevitra ny amin’ny tokony hanaovana fanitsiana ny lalàmpanorenana na tsia. Raha lanintsika ny hoe hotohizana izao rafitra ifampitondrantsika izao, tsy ilaina akory na ny fifidianana aza: mandany vola sy andro.
Raha hanova rafitra hahasoa antsika isika, sahaza amin’izao vaninandro izao: mila ovaina aloha ny rafitra rehetra mba hananantsika rafitra fifampitondrana vaovao, araka ny fanazavany. Izay vao haroso ny fifidianana.
“Tsy mety amintsika ny fifidianana filoham-pirenena avy hatrany”, hoy izy. Tokony ho ny rafitra avy aty ambany no hiaingana amin’ny fanatanterahana fifidianana: ny fokontany aloha, izay vao miakatra. Inona ny vokatry ny fifidianana filoham-pirenena mialoha hatrany? Ny teo ihany no eo…
Tsy ny fihamehana handresy amin’ny fifidianana ve izao mampihazakaza ny mpitondra hanitsy ny lalàmpanorenana izao?